सिभिल लघुवित्तको खुद नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्दा अन्य वित्तीय सूचकको अवस्था कस्तो ? – Insurance Khabar
सिभिल लघुवित्तको खुद नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्दा अन्य वित्तीय सूचकको अवस्था कस्तो ?
प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:३८
सिभिल लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमासससम्म आइपुग्दा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा लघुवित्तको खुद नाफा ४५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा लघुवित्तले १ करोड १२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा पनि लघुवित्तले बृद्धि गरेको छ । आर्थिक ववर्ष २०७५ ७६ को १२ महिनाको अवधिसम्ममा लघुवित्तले ३९ प्रतिशतले खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । भने १५ प्रतिशतले संचालन मुनाफा बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमाससम्मा २७ करोड १ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरी १ अर्ब २ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तले निक्षेप संकलनमा ६२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो भने कर्जा प्रवाहमा ७८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो । त्यसैगरी सापटिमा ७९ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो ।
त्यस्तै लघुुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ८९ पैसाले बढेर १४ रुपैयाँ ३६ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय १८ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३४ रहेको छ ।